REER BAOW AYAA KU LEH.By:Mohamed Mousa | Radio Borama
You are here : Radio Borama » FADHIGA SUBULAHA » REER BAOW AYAA KU LEH.By:Mohamed Mousa
REER BAOW AYAA KU LEH.By:Mohamed Mousa
Posted by admin on April 15th, 2012 12:25 AM | FADHIGA SUBULAHA
Boorama waxay noqotay garoon kubadeed. Waxa garoonka ka bilaabmay tartanka kubada cagta oo ay u tartamayaan 15ka xisbi siyaasadeed ee ay dhamaan hogaaminayaan niman reer sheikh Ishaaqihi. Wuxuu qosol ka joogaa sida ay u gala badaniyaan iyo kooxda koobka qaadan doonta.
Tartankaasi wuxuu abuuray in Gadaboursiga la qaybsado oo dab la dhex dhigo. Waxa loogu tala galay in ay dabkaasi ku wada gubtaan. Kala qaybsigan siyaasadeed waxa ka sii daran sharci la’aanta hadda soo fuud saartay ee u sobobtay qadiyada la xidhiidha Godoomiyaha Dowlada Hoose. Qadiyadani waxay cadaysay heerka nuqsaaneed ee la gaadhsiiyey Gabadaboursiga. Waxa kale oo ay cadaysay in nidaamkii dowladeed ee wadanka lagu xukumilaahaa una jirin ama la gees maray. Waxyaabo an lagu morminbaa jira. Waxa ka mid ah cadaalda iyo hantida ummada.
Waxa la garan laayahay waxa aasay baadhitaankii hantidowrku u gudbiyey Xeer Ilaaliyaha Guud ka bacdina xeer ilaaliyuhu ku amray xeer ilaaliyaha Gobolka in u fuliyo. Mar hadii dacwad nuucan ah lagu soo oogo qof madax ah ama shaqaala ah waa in laga fadhiisiya shaqadaha ilaa inta maxkamadiisu dhamaanaysu. Hadii wax lagu helana abaalkiisa la mariyo hadii wax lagu waayana shaqadiisa lagu celiyo isaga oo la xaalaayo. Qadiyada intaas ku eg ayey kuwa madaxdihina ummad dhan cadaawad ku dhex abuureen. Xukuumada iyada oo og jawiga Dowlada Hoose ay soo celisay Mayorka. Habba soo celise e Mayorku ma si habsami ah ma u qaban karaa shaqadiisa. Gadabuursigu ma wuxuu fahmi waayey ujeedada ay xukuumada uga dan leedahay qaskan.
Xuguumada Hareisa waxay u badheedhay kuna tala gashay in Gadaboursigu isaga horyimaadu qadhiyadan Mayorka. Xuguumadu ujeeday u gees martay cadaalada. Waxay u kastay in Gadabuursi ku gubto, kuna kala tego arintan. Xukuumadani waxay is dabajoog ah uga shaqaysaa sidii Gadabuursi tamratiisu u baaba’ado. Xuguumada iyo Xisbigeeduba waxay ku tala jiraan sidii ay taageero uga heli lahaaeen Gadabuursiga. Hadday ka waayaana in ay Gadabuursiga col dhex dhigaan.
Gadabuursigu uu ku kala qaybsami karaa siyaayada hadii iyagu u madax banaan yihiin. Laakiin marka laga hago Hargeisa ee qabiilba qabiil laga horgeeno ee waliba lasii lafa guro qabiilkasta wuxuu Gadabuursi noqday tusbax la furay sidii loo soo ururin lahaana waxa horjooga Xukuumada oo kulba dab dhex dhigaysa. Xuguumado waxay iska ilaalisaa in ay dad taya leh u soo magacowda Gobolka Awdal. Waxay door bidaa daba dhilifyo ay ka hogaamiso Hargeisa. Gadabuursina wuxuu ku kala tegay hal wasiir ama laba iyo Badhasaab. Gadabuursi haba ku kala qaybsamo siyaasad ee ma wuxuu garan waayey danta iyo nabada guud. Xuguumada Mustacmaraadka Hargeisa waxay ku goosatay in ay afdoobtu Somaliland inta Gadabuursi isagu isku mashqoolsan yahy. Haddaba Gadabuursi maxaa meel u yaala marba hadii arini sidan tahay?
« Sh.Xasan Deheeye oo ku dheeraaday Mihimada luuqada Somaliga iyo kaalintii uu ka galay Abwaan Xasan Sheekh Muumin (Daawo Video)
Ururka Gargaarka ee TOWFIIQ oo deeq lacaga gudoonsiiyey qoys shan qof ka xanuunsanyihiin xaga dhimirka (Daawo Video) »